Bit By Bit - agba nwere - 4.5.2 Mee nyocha nke onwe gị
-Ewu gị onwe gị na nnwale nwere ike ịdị ọnụ, ma ọ ga-eme ka i nwee ike nnwale na ị chọrọ.
Na mgbakwunye na ịnweta nyocha n'elu gburugburu gburugburu, ị nwekwara ike ịmepụta nnwale onwe gị. Ụzọ kachasị mma nke usoro a bụ njikwa; ọ bụrụ na ị na-ewu nnwale, ị nwere ike ịmepụta gburugburu ebe obibi na ọgwụgwọ ịchọrọ. Ọnọdụ gburugburu ebe obibi a na-emepụta ihe nwere ike ịmepụta ohere iji nwaa nyocha ndị na-agaghị ekwe omume ịnwale n'ime gburugburu ọnọdụ. Ihe nkwụsị isi nke ịmepụta nnwale nke onwe gị bụ na ọ nwere ike ịdị ọnụ ma na gburugburu ebe obibi ị nwere ike ịmepụta nwere ike ọ gaghị enwe ihe gbasara usoro ihe omume. Ndị na-eme nchọpụta na-arụ ọrụ nke onwe ha ga-enwekwa atụmatụ maka ndị na-ekere òkè. Mgbe ha na-arụ ọrụ na usoro ndị dị ugbu a, ndị nchọpụta na-ebute ihe ndị ahụ ha na-eme. Ma, mgbe ndị na-eme nchọpụta na-arụ ọrụ nke onwe ha, ha kwesịrị ịbịnye ya. N'ụzọ dị mma, ọrụ ndị dị ka Amazon Mechanical Turk (MTurk) nwere ike inye ndị na-eme nchọpụta ụzọ dị mfe iji mee ka ndị na-agụ ha nwee nkwenye ha.
Otu ihe atụ nke gosipụtara àgwà ọma nke gburugburu ebe obibi maka nyocha ihe omimi bụ ihe nyocha nke dijitalụ site na Gregory Huber, Seth Hill, na Gabriel Lenz (2012) . Nnwale a na-achọpụta ihe ga-eme ka ọ ghara ịdị irè iji rụọ ọrụ ọchịchị ochichi. Nnyocha ndị a na-emeghị n'oge gara aga banyere ntuli aka n'ezie na-atụ aro na ndị nhoputa ndi ochichi enweghi ike ịchọpụta nke ọma ndị ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Karịsịa, ndị na-eme nchọpụta ga-ata ahụhụ site na mkparị atọ: (1) ha na-elekwasị anya n'oge na-adịbeghị anya kama ịrụ ọrụ; (2) ha nwere ike ịme ihe site n'iji okwu ọnụ, mmepụta, na ahịa; na (3) ha nwere ike imetụta ha site na ihe ndị na-enweghị njikọ na arụmọrụ dị mkpa, dị ka mmeri nke ndị egwuregwu egwuregwu mpaghara na ihu igwe. Na nchọpụta mbụ ndị a, Otú ọ dị, ọ na-esiri ike ịhapụ ihe ọ bụla n'ime ihe ndị a site na ihe ndị ọzọ na-eme n'eziokwu, ntuli aka na-adịghị mma. Ya mere, Huber na ndị ọrụ ibe ha mepụtara ebe ịme ntuli elu kachasị mfe iji wepụ onwe ha, wee chọpụta ọmụmụ ihe, nke ọ bụla n'ime ihe atọ a.
Ka m na-akọwa nhazi nke a dị n'okpuru, ọ ga-ada ụda nke ọma, ma cheta na ọhụụ abụghị ihe mgbaru ọsọ na ịnwepụta ụlọ. Kama nke ahụ, ihe mgbaru ọsọ bụ ịmepụta usoro nke ị na-achọ ịmụ, nke a na-esikwa ike mgbe ụfọdụ na nchọpụta na ihe ndị ọzọ (Falk and Heckman 2009) . Ọzọkwa, na nke a, ndị nnyocha ahụ kwuru na ọ bụrụ na ndị nluli aka enweghi ike iji nyochaa arụmọrụ na ọnọdụ a dị mfe nghọta, mgbe ahụ, ha agaghị enwe ike ime ya na nhazi nke dị mfe karị.
Huber na ndị ọrụ ibe ha ji MTurk mee ka ndị nabatara ya. Ozugbo onye otu na-enye nkwenye nkwenye ma nyefee ule dị mkpirikpi, a gwara ya na ọ na-ekere òkè na egwuregwu 32 ga-enweta akara ndị nwere ike ịghọ ezigbo ego. Ná mmalite nke egwuregwu ahụ, a gwara onye ọ bụla nọ na ya na e kenyere ya "onye nhazi" nke ga-enye ya ihe ngosi n'efu na gburugburu ya nakwa na ụfọdụ ndị na-ekenye ihe na-emesapụ aka karịa ndị ọzọ. Ọzọkwa, onye ọ bụla nọ na-agwa ya na ọ ga-enwe ohere iji chebe ya ma ọ bụ nye ya ihe ọhụrụ mgbe agbari egwuregwu iri isii na isii gachara. N'inye ihe ị maara banyere ihe mgbaru ọsọ nyocha nke Huber na ndị ọrụ ibe gị, ị nwere ike ịhụ na onye inyeaka na-anọchite anya gọọmentị na nhọrọ a na-anọchi anya nhoputa ndi ochichi, mana ndị na-esoghị ama ihe mgbaru ọsọ niile nke nyocha ahụ. Na mkpokọta, Huber na ndị ọrụ natara ihe dị ka mmadụ 4,000 na-akwụ ụgwọ ihe ruru $ 1.25 maka ọrụ nke were nkeji asatọ.
Cheta na otu n'ime nchọpụta sitere na nchọpụta mbụ bụ na ndị nluli aka na-akwụghachi ụgwọ ma na-ata ahụhụ maka ndị ga-esi na ya pụta, dị ka mmeri nke ndị egwuregwu na mpaghara ihu igwe. Iji chọpụta ma ndị nwere ike ịme ntuli aka ga-emetụta mkpebi ndị na-adịghị na ya na ọnọdụ ha, Huber na ndị ọrụ ibe kwadoro ịgba chaa chaa. Na ma ọ bụ 8th gburugburu ma ọ bụ nke iri na isii (yabụ, tupu oge ahụ iji dochie onye na-ekenye onye na-enyefe ya), etinyeghị ya n'ụgbọelu na ebe ụfọdụ meriri 5,000 isi, ụfọdụ meriri 0 isi, na ụfọdụ ihe efu 5,000. A na-ezu lotiri a iji mee ka akụkọ ọma ma ọ bụ nke dị njọ na-adabere na ọrụ nke onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ bụ ezie na a gwara ndị na-eto eto na ịgba chaa chaa enweghị njikọ na njirimara nke onye na-ekenye ha, ihe si na lotrị ahụ ka na-emetụta mkpebi ndị otu. Ndị na-erite uru na lotrị ahụ nwere ike ịhapụ onye na-ekenye ha, nke a na-esiwanye ike mgbe batrị ahụ mere na gburugburu 16-kpọmkwem tupu mkpebi ngbanwere-karịa mgbe o mere gburugburu 8 (nọmba 4.15). Ihe ndị a, yana nke ọtụtụ ihe ndị ọzọ e mere na akwụkwọ ahụ, dugara Huber na ndị ọrụ ibe ya iji kwubie na ọbụna n'ọnọdụ dị mfe, ndị nlhoputa nwere ike ime mkpebi ndị amamihe dị na ha, nke na-emetụta nchọpụta n'ọdịnihu gbasara ntinye mkpebi ntuli aka (Healy and Malhotra 2013) . Nnwale nke Huber na ndị ọrụ ibe ya na-egosi na a pụrụ iji MTurk mee ka ndị na-amụ ihe nyocha maka ụdị nyocha nke ụlọ nyocha iji chọpụta kpọmkwem ihe dị iche iche. Ọ na-egosipụtakwa uru nke ịmepụta ebe ịmepụtara onwe gị: o siri ike iche n'echiche otú usoro ndị a nwere ike isi bụrụ nke dị ọcha n'ebe ọ bụla ọzọ.
Onyonyo 4.15: Ihe si na Huber, Hill, and Lenz (2012) . Ndị na-erite uru site na lotrị ahụ nwere ike idowe onye na-enye ha ego, nke a na-esiwanye ike mgbe batrị ahụ mere na gburugburu 16-kpọmkwem tupu mkpebi ngbanwere-karịa mgbe ọ mere na gburugburu 8. Adapụtara Huber, Hill, and Lenz (2012) , ọgụgụ nke 5.
Na mgbakwunye na iwu ụlọ-dịka nyocha, ndị na-eme nchọpụta nwekwara ike ịmepụta nyocha ndị dị ka ubi. Dịka ọmụmaatụ, Centola (2010) wuru nyocha nke dijitalụ iji nyochaa mmetụta nke usoro netwọk mmekọrịta na mgbasa ozi. Ajụjụ nyocha ya chọrọ ya ka ọ na-ahụ otu omume ahụ na-agbasa n'ime ndị mmadụ nwere ụdị ọrụ netwọk dị iche iche, mana ha enweghị ike ịhọrọ ya. Nanị ụzọ ị ga esi eme nke a bụ ihe a na-atụle, bụ nke a na-eme nke ọma. N'okwu a, Centola wuru obodo na-ahụ maka ahụike na weebụ.
Centola natara ihe dịka otu narị mmadụ ise na ise na mgbasa ozi na ebe nrụọrụ weebụ. Mgbe ndị na-abata na-aga n'Ịntanet - nke a na-akpọ Saịtị Ntanye Ndụ - ha nyere ikikere nkwenye ma nyezie ha "ndị nlekọta ahụ ike". N'ihi na Centola kenyere ndị enyi a, ọ nwere ike ijikọta usoro netwọk dị iche na dị iche iche. E wuru ụfọdụ ìgwè ka ha nwee netwọk ntanetị (ebe ọ bụla onye ọ bụla nwere ike ijikọta ya), ebe ndị ọzọ nọ na-ewukwasị ka ha nwee netwọk clustered (ebe njikọ dịkwuo oke ala). Mgbe ahụ, Centola wepụtara omume ọhụrụ n'ime netwọk ọ bụla: ohere ịdebanye aha maka ebe nrụọrụ weebụ ọhụrụ yana ozi ahụike ọzọ. Mgbe ọ bụla mmadụ debanyere aha maka ebe nrụọrụ weebụ ọhụrụ a, ndị enyi ya niile nwere ahụike natara ozi na-eziputa àgwà a. Centola chọpụtara na omume a-ịbanye maka ebe nrụọrụ weebụ ọhụrụ-gbasakwuo n'ihu na ngwa ngwa na netwọk ụyọkọ karịa na netwọk ntanetị, nchọpụta nke megidere ụfọdụ echiche ndị dị ugbu a.
N'ozuzu, ịmepụta onwe gị na-enye gị ọtụtụ njikwa; ọ na-enyere gị aka ịmepụta ebe kachasị mma iji wepụ ihe ị chọrọ ịmụ. O siri ike iche n'echiche otú nnwale abụọ ndị ahụ m kọwapụtara gaara esi rụọ ọrụ na gburugburu ebe obibi. Ọzọkwa, ịmepụta usoro nke gị na-ebelata nchebara echiche na-eme ka ị na-enyocha usoro dị ugbu a. Otú ọ dị, mgbe ị rụpụtara nnwale nke onwe gị, ị na-agbaba n'ọtụtụ nsogbu ndị na-ezute na nyocha nke ụlọ: ichere ndị na-arụ ọrụ na nchegbu banyere ihe omimi. Nke ikpeazụ bụ na ịmepụta nnwale nke onwe gị nwere ike ịdị oké ọnụ ma na-ewe oge, ọ bụ ezie na, dị ka ihe atụ ndị a na-egosi, ihe ndị ahụ nwere ike ime site na gburugburu ebe dị mfe (dịka ọmụmụ Huber, Hill, and Lenz (2012) . na ọnọdụ dị mgbagwoju anya (dịka ọmụmụ banyere netwọk na contagion site na Centola (2010) ).